SLT SPORTS: Kulamada La Ciyaari Doono Championka, Xidhiidhkii Mata Iyo Mourinho Iyo Qodobo Kale | Somaliland Today
← Hay’adda WFP Waa Caqabadda Koowaad Ee Hortgaan Inay Dadka Somaliland Faqriga Ka Baxaan.
Muranka Goleyaasha deegaanka oo dalka ku baahay Iyo Xildhibaanno Lagu Xidhay Laascaanood →
SLT SPORTS: Kulamada La Ciyaari Doono Championka, Xidhiidhkii Mata Iyo Mourinho Iyo Qodobo Kale
(SLT-Egland)-Juan Mata Oo Shaaca Ka Qaaday Inuusan Mourinho Lahadal Intii Ay Chelsea Wada Joogeen.
Xidiga Man united ee Juan Mata ayaa shaaca ka qaaday inuusan tababarihiisii hore ee Jose Mourinho la hadli jirin markii ay wada joogeen Chelsea. Mata ayaa Man United ku biiray bishii January ee horaantii sanadkan 2014.
Xidhiidhaka u dhexeeyay Mourinho iyo Mata ayaa ahaa mid aad u liita taas oo ugu danabayn keentay inuu ku biiro kooxda Man united. Mata ayaana Man United ugu biiray lacag dhan 37.1 milyan oo gini, wuxuuna ku biiray bishii January ee bilawgii sanadkan.
Mata ayaa sanadkii hore ay jamaahiirta Chelsea u doorteen inuu ahaa laacibkii kooxdooda ugu fiicnaa balse imaatinkii Mourinho ayaa god dheer ku riday hamigii Mata ee Chelsea. Mata2
Mourinho ayaa caan ku ah inuu ciyaartoyda qaar si gaar ah u caddiyo waana sidii ku dhacday Mata iyo ciyaartoy kale oo ka horayay.Mata ayaa isagoo arintaa ka hadlaya yidhi: “ Hadday xumayd iyo haddii ay wanagsanaydba, Mourinho wax xidhidh ah maanu lahayn, wax wada hadal ahi nama dhex marin”.
“Wax farxad ah maan dareemayn laakiin markasta waxaan ixtiraam wayn siin jiray ciyaartoyda aan isku kooxda nahay. Kama warhaysid waxa noloshaada kugu dhici doona”. Mata ayaa sidan u sheegay El Pais.
David Moyes ayaa 26 jirkan kooxda Man united ku soo daray balse Mata ayaa amaanay tababarihiisa Louis Van Gaal wuxuuna yidhi: “Van Gaal waa tababare khibrad wayn leh waxbadana waanka bartay, marka uu wax kuu sheegayo wuxuu kuugu sheegayaa si adag laakiin waa tababare si dhaw ula shaqeeya ciyaartoydiisa. Xaqiiqdii markasta wuxuu jecel yahay inuu anaga nala sheekaysto, wuxuuna naga waraystaa sida aanu u aragno waxyaabaha aanu taba barka ku samayno”.
Michel Platini: Ronaldo Iyo Messi Ma Astaahilaan Kubada Dahabiga Ah Sanadkaan”.
Madaxwaynaha xidhiidhka kubada cagta yurub Michel Platini ayaa ka hadlay abaal marinta laacib ka aduunka oo labixin doono bisha january.
Platini ayaa sheegay in Ronaldo iyo Messi midkoodna aanu qalmin ku guulaysiga kubada dahabiga ah wuxuuna intaa ku daray inuu rajaynayo in lasiiyo sanadkan laacib u dhashay dalka jarmalka.
Michel Platini oo wax laga waydiiyay cida uu filayo inay ku guulaysato kubada dahabiga ah ee sanadkaan ayaa yiri:
“Ma haboona in kubada dahabiga ah lasiiyo Messi ama Ronaldo, kuma jiro dadka codaynaya lakiin waxaan aaminsahanay in qofka ku guulaysanaya uu ahaado laacib ka soo jeeda jarmalka maadama ay ku guulaysteen koobkii aduunka”.
“Ronaldo iyo Messi waxay ka midyihiin laacibiinta ugu fiican aduunka taasina shaki kuma jiro lakiin wax guul ah kama keenin koobkii aduunka, waxaana u xaqleh qaranka Jarmalka waayo waxay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u fiican”.
“Waa lama huraan in kubada dahabiga ah la siiyo laacib u dhashay Germany, qaabka wax loowado waa in labadalo kadib koobkii aduunka, waxaan filayaa inay sidaas dhici doonto”.
Kulamada Champions League Ee La Ciyaari Doono Caawa.
Waxaa markale dib u soo laaban doona kulamada Champions Leaquega heer kiisa groupyada oo la ciyaari doono kulamadii saddexaad.Waa hubaal in kulamada Champions Leaquega ee todobaadkani ay yeelan doonaan xiiso gaar ah. Waxaananu halkan ku eegidoonaa kulamda Champions Leaaeuga ee la ciyaari doono talaadada iyo kooxaha fooda is dari doona.
CSKA Moscow Vs Manchester City: kulankan oo ka dhici doona guriga kooxda ree Russia ee CSKA Moscow ayay labada kooxood ku ciyaaridoonaan garoon faaruq ah ama madhan kadib markii Uefa ay sidaa ku ganaaxay kooxda CSKA Moscow. Ciyaartan ayaa soo galidoonta 17:00 GMT ama 7:00 Fiidnimo ee saacada Geeska Afrika.City vs CSKA
Dhamaan kulamada hoos ku qoran ayaa bilaaban doona 19:45 GMT ama 9:45 habeenimo ee saacada Geeska Afrika:
Manchester City ayaa ka fikiraysa inay soo gaadho guusheedii ugu horaysay ee Champions Leaqeuga ee xili ciyaareedkan. CSKA iyo Man City ayaa ugu hooseeya groupka E ee dhimashada ee ay kuwada jiraan Bayern Munich iyo Roma.Citizens ayaa u baahan guul ay ka gaadho CSKA Moscow haddii ay doonayso inay Roma kula tartanto kaalinta labaad, iyadoo Roma ay wajihi doonto kulan adag oo ay ka hor iman doonto kooxda Bayern Munich.
Roma Vs Bayern Munich: kooxda qaab ciyaareedka fiican ku jirta xili ciyaareedkan ee Roma ayaa gurigeeda ku soo dhawayn doonta kooxda Bayern Munich. Roma ayaa labadii kulan ee hore ka ururusatay afar dhibcood, waxayna doonaysaa inay guul wayn ka gaadho kooxda Guardiola ee Bayern Munich.Roma Vs Bayern
Bayern ayaa labadii kulan ee hore soo wada guulaysatay waxayna ka fikiraysaa inay halkii ka sii wado guulaheeda isdaba jooga ah, bale kulanka ay Roma gurgeeda ku booqan doonto ayaa noqon doona imtixaan adag oo la fiirin doono sida ay uga gudubto.
APEOL VS PSG: kooxda ree France ee PSG oo kulankii hore guul muhiim ah ka gaadhay kooxda Barcelona ayaa u safri doonta kooxda ree Cyprus ee APEOL.PSG ayaa kulankan iska soo xaadirin doonta iyadoo group F ku hogaaminaysa 4 dhibcood, waxayna ku fikiraysaa inay sii dheeraysato hogaanka haddii ay guul ka soo gaadho kooxdan APEOL.
Barcelona Vs Ajax: Barcelon ayaa gurigeeda Camp Nou ku soo dhawn doonta kooxda ree Netherlands ee Ajax. Barcelona ayaa doonaysa inay dib ugu soo laabto tubta guusha ee Champions Leaquega kadib guul daradii kulankii hore ka soo gaadhay kooxda PSG.Barcelona ayaa ku jirta kaalinta labaad waxayna leedahay 3 dhibcood, waxayna hal dhibic ka hoosaysaa PSG. Barcelona Vs AJAX
Chelsea Vs NK Maribor:Kooxda Jose Mourinho ee Chelsea ayaa Stamford Bridge ku qaabil doonta kooxda NK Maribor. Chelsea ayaa Group G ku hogaaminaysa 4 dhibcood waxayna ku hamiyaysaa inay guul muhiim ah ka gaadho kooxdan ree Slovena ee Moribor. Kulankan ayuu seegi doonaa Diego Costa sida uu cadeeyay Jose Mourinho balse Chelsea ayaa la rajaynayaa inay ka faa’iidaysan karto garoonkeeda iyo walba jamaahiirteeda.Chelsea vs Maribor
Bate Vs Shaktar Donetsk
Maxaa Laga Filan Karaa Luis Suarez Vs James Rodriguez Iyo Kroos Vs Rakitic, Wajiyada Ku Cusub El Clasico
Haddii aan si guud u eegno, afartan ciyaartoy ayaa ka mid ah ciyaartoyda ku cusub kooxahaha Real Madrid iyo Barcelona waxaana la rajaynayaa inay markii ugu horaysay ay ciyaaraan kulamadoodii ugu horeeyay ee Clasico-da.
Real Madrid ayaa xagaagii dhawaa la soo wareegtay James Rodriguez iyo Toni Kroos, waxayna kooxdooda kula raaxaysanaayaan qaab ciyaareed heer sare ah. Inkasta oo ay Real Madrid horyaalka ku bilaabatay qaab ciyaareed su’aal laga keenay ayay haddana horumar wayn ka samaysay qaab ciyaareedkeeda.
Luis Saurez VsJames Rodriguez :
James and Suarez
Real Madrid ayaa James Rodriguez kula soo wareegtay lacag dhan 80 milyan oo yuro, iyadoo kala soo wareegtay kooxda Monaco ee ree France. Madrid ayaa markii ay aragtay wacdraha uu James ka dhigay tartankii koobka aduunka ee lagu qabtay Brazil ayay lacag abdan ku soo iibsatay. Rodriguez ayaa ku guulaystay kabta dahabka ah ee gool dhalinta koobkii aduunka, wuxuuna sidoo kale ku guulaystay goolkii ugu quruxda badnaa ee laga dhaliy tartakii koobka aduunka.
James ayaa ka ciyaari kara labada baalood ee weerarka iyo waliba No.10, waana ciyaartoy halis ku ah inuu si toos ah u bartil maameedsado goolka. James ayaa koobkii aduunka ka dhaliyay 6 gool, wuxuuna shanti kulan ee uu koobka aduunka ka ciyaaray saddex ka mid ah loo doortay laacibkii garoonka ugu wanaagsanaa. Laakiin James ayaan wali kooxdiisa Real Madrid si fiican ula qabsan wuxuuna isku dayayaa inuu saamayn ku yeesho kooxda Carlo Ancelotti. James ayaa laga filan karaa inuu kulankan isku muujiyo isla markaana uu saamayn ku yeelan karo.James
Dhinaca kale Barcelona ayaa lacag redhoodh ah kula soo wareegtay weerar yahankii hore ee kooxda Liverpool Luis Suarez. Barcelona ayaa Suarez ka bixisay lacag dhan 90 milyan oo yuro. Suarez ayaan wali kulan rasmi ah kooxdiisa Barcelona u ciyaarin kadib markii ay FIFA ku riday gaax afar bilood ah taas oo ku timid qaniinyadii Chiellini ee tartankii koobka aduunka.
Suarez ayaa la rajaynayaa inuu kulanka El Clasico dib ugu soo laabto kooxdiisa Barcelona, wuxuuna isha ku hayaa inuu kulankiisii ugu horeeyay oo rasmi ah uu kooxdiisa Barcelona u ciyaaro. Suarez ayaa il gaara ah lagu eegidoonaa haddii uu kalankan nasiib u yeesho inuu ciyaaro.
Suarez ayaa xili ciyaareedkii hore Liverpool ka caawiyay inay dib ugu soo laabto Champions Leaquega, wuxuuna u dhaliyay 31 gool oo horyaalka ingiriiska ah. Suarez ayaa todobaadkii hore la gudoonsiiyay abaal marinta kabta dahabka ah ee Yurub oo ay kuwada guulaysteen C.Ronaldo.Suarez
Inkasta oo Suarez uu muddo afar bilood ah ka maqnaa garoomada isla markaana la sheegay inuu cayilan yahay oo uu culays ku soo kordhay ayaa haddana laga filan karaa inuu saamayn muuqata ku yeelan karo kulanka Real Madrid iyo Barcelona. Suarez ayaa ah ciyaartoy bilaw illaa dhamaadka ciyaarta laga filan karo inuu gool dhaliyo isla markaana uu dhibaato ku abuuro difaacyada ka soo horjeeda.
Marka aad eegto xirfada iyo boos qaadasha Suarez, iyo waliba kubbada min qiyaaska ku dhisan ee Barcelona waxaa la filan karaa in haddii uu Suarez kulan ciyaaro inuu goolkiisa kowaad ka dhalin karo isla kulankiisa kowaad sidii uu sameeyay markii uu Liverpool ku soo biiray.
Toni Kroos Vs Ivan Rakitic:
Kroos Vs Rakitic
Markale labdan ciyaartoy ayaa ka mid ahaa saxiixyadii ay Real Madrid iyo Barcelona xaagaagii dhawaa la soo saxiixdeen. Toni Kroos ayay Real Madrid kala soo wareegtay kooxda Bayern Munich. Kroos ayaa wacdaro ka dhigay tartankii koobka aduunka wuxuuna ka mid ahaa ciyaartoydii xulka qaranka Jarmalka u horseeday inay ku guulaystaan koobkii aduunka ee Brazil.
Kroos ayaa qaab ciyaareed fiican kula naaloonaya kooxdiisa Real Madrid.Heerka dhamaystiranka kubbad bixinta Kroos ayaa ah 92.7% taas oo wax yar ka saraysa Rakitic.
Inkasta oo Kroos uu ka ciyaaro boos uuna hore uga soo ciyaarin oo ah dhexda danbe ayuu ku dadaalayaa sidii uu ula qabsan lahaa booska uuna markii hore filayn inuu ka ciyaari karo.
Rakitic ayay Barcelona kala soo wareegtay kooxda Sevilla kadib markii uu ka caawiyay inay ku guulaystaan koobka Europa Leaque xili ciyaareedkii hore.Rakitic ayay Barcelona ula soo wareegtay si uu u buuxiyo booska 34 jirka Xavi Hernandez. Rakitic ayaa shaqo fiican ka qabtay Barcelona waxaana laga doonayay inuu kubbada u qaybiyo sida Xavi Hernandez, arintaa ayuuna si fiican uga soo baxay isagoo 90% uu yahay dhamaystiranka kubbad bixintiisu.rakitic
Waxaa Rakitic kulanka Real Madrid iyo Barcelona laga filan karaa inuu saamayn muuqata ku yeelan karo isla markaana waxaa la filayaa inuu ku bilaaban doono line upka Luis Enrique.Inkasta oo Xavi uu ku bilawday kulankii Eibar ayaa la filan kara inuu kulanka Real Madrid ku bilawdo kursiga kaydka.